I-17 yabahambi abahamba phambili kubantu abadala: isikhokelo somthengi (2021) - Impilo | Eyenkanga 2021
Inkampani, Iindaba Imfundo Yezempilo, Iindaba Inkampani Imidlalo Enzima Inkampani, Imfundo Yezempilo Ukuzonwabisa Impilo-Ntle Uluntu, Inkampani Imidlalo Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Impilo Uluntu, Impilo Ukuphuma Izilwanyana Zasekhaya
Eyona >> Impilo >> I-17 yabahambi abahamba phambili kubantu abadala: isikhokelo sakho sokuthenga okulula
I-17 yabahambi abahamba phambili kubantu abadala: isikhokelo sakho sokuthenga okulula
Njengoko sikhula, ukuhamba rhoqo kuya kusiba nzima ngakumbi. Kodwa xa isitshixo sempilo engcono yengqondo kunye neyasemzimbeni sithetha ukuphakama nokujikeleza, iba yinto ebalulekileyo, kwaye ngaxa lithile, nokuba njalo ezona ntonga zintle musa ukubonelela ngozinzo olwaneleyo kunye nenkxaso.
Siphande olona hambo luhamba phambili kubantu abadala kunye nabo bonke abantu ukuze beze noluhlu oluhle kakhulu lwamathuba onokukhetha kuwo. Nganye inikezela indibaniselwano eyodwa yoyilo kunye nokusebenziseka kweeasethi eziza kukubonelela ngeendlela ezisebenza kwiimeko zakho ezithile.
Nokuba ujongene nokukhubazeka okunxulumene nobudala, ukuphazamiseka kwistroke, uqhaqho, okanye eminye imiba yezonyango, aba bahambahambayo banokukunceda wena okanye umntu omthandayo ukuhamba kwindlela yokubuyela kwimeko yesiqhelo. Olu luhlu lubonelela ngeendlela zoyilo ezahlukileyo, nganye ijolise ekunikezeleni umgangatho ophezulu, nokuba ukhangela isiseko sokuhamba kuhlahlo-lwabiwo mali okanye ujonge imodeli yokuhambisa ye-Deluxe.
Qaphela kwakhona: Izipho zaBadala
Zeziphi ezona Ndwendwe ziBalaseleyo kubadala?
Qhuba i-Euro yeNitro ye-Euro Style Rollator Walker
Amavili angaphambili azinzileyo
Ixabiso: $ 283.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-UPWalker Walker ethe tye Uphengululo loMthengi waseAmazon
Yenzelwe ubungakanani obude besakhelo
Izinto ezininzi eziluncedo
Ixabiso: $ 745.95 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Umhambi we-NOVA 3 Wheel Rollator Walker
Iifolokhwe ukuya kwii-intshi ezingama-9.25 ububanzi
Imile naxa isongiwe
Amavili aphezulu e-intshi asibhozo aphezulu
Ixabiso: $ 158.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-roller-GO Double Walker ethe tye Uphengululo loMthengi waseAmazon
Uyilo oluthe tye
Ukulungele ukuphakama ukuya kwi-6 '6'
Uyilo lokusonga kabini
Ixabiso: $ 249.00 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Intuthuzelo yeBrava eyiCompact Rolling Walker
Iivili zerabha ezinamavili
Indawo ebanzi eyongezelelweyo
Ixabiso: $ 255.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-Medline Heavy Duty Bariatric Folding Walker
Isakhelo sealuminium esihlala ixesha elide
Indawo yokuhlala ukuya kuthi ga kwiiponti ezingama-500
Ixabiso: $ 68.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-Medline Simplicity Rollator Walker
Ixabiso: $ 210.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-Evolution yokuHamba kweZonyango eziLula Uphengululo loMthengi waseAmazon
Iziphatho ezinokutshintshwa ngokulula
Iindlela ezintathu zobungakanani obahlukeneyo
Ixabiso: $ 349.00 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Qhuba iOrverator yokuhamba iOrver Medical Go-Lite
Kulungile kumhlaba ongalinganiyo
Ixabiso: $ 159,00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-Beyour Walker ethe tye ene-Backrest Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ixabiso: $ 209,99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Ubomi boMgcini oSindisa uMhambi Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ixabiso: $ 99,00 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
UHugo oShukumayo ohamba ngeRolator Walker Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ukulungelelaniswa ngokubanzi kwiindawo eziphakamileyo
Iivili ezisibhozo ze-intshi zizinzile
Ukubamba ngesandla kwe-Ergonomic
Ixabiso: $ 108.89 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-OasisSpace Aluminium Rollator Walker Uphengululo loMthengi waseAmazon
Uyilo olwahlukileyo xa kuthelekiswa nabanye
Ixabiso: $ 159,99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
Umgca weRolator Walker
Ixabiso: $ 118.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-Lumex 3-Wheel Cruiser Compact Walking Walker Uphengululo loMthengi waseAmazon
Ixabiso: $ 149,99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
I-Rolling Walker ebukhoma ngoku Uphengululo loMthengi waseAmazon
Zisonga ubukhulu becompact
Iivili zangaphambili ezisuswayo zokugcina
Ukubamba Ergonomic kunye iziqhoboshi
Ixabiso: $ 136.99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
U-ELENKER ohamba ngokuthe tye Uphengululo loMthengi waseAmazon
Iindawo zokulwa ezixineneyo
Kubandakanya isitulo kunye nebhegi yokugcina
Ixabiso: $ 219,99 Ivenkile eAmazon Thenga ngoku Funda uphononongo lwethu
1. Qhuba i-Medical Nitro ye-Euro Style Rollator Walker
Ixabiso: $ 283.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Eziluncedo:
Uyilo olwahlukileyo lwaseYurophu longeza uzinzo
Isakhelo sokubopha umnqamlezo senza ukuba kube lula ukusonga
Iza kunye nesitulo se-nylon esicocekileyo
Iivili ezinkulu zangaphambili zilungile kuwo wonke umhlaba
Spendy xa kuthelekiswa nezinye
Kunzima ukulawula kwindawo egudileyo
Inkulu kakhulu kunaleyo yobungakanani obunciphayo
Xa ucinga malunga nokuhamba okanye isihamba, kunzima ukuba ungagigitheki malunga leyo ibizwa ngokuba yiNitro , kodwa ke, sicinga ukuba yinxalenye yomtsalane ngale yunithi ibukhali. Uyilo lwe-Euro lwahluke mpela kuninzi lwabahambi esibajongileyo apha, uyilo lwe-Ultra-compact, kunye nesakhelo esinokuwela ngokulula. Isibambo esihlalweni sivumela ukubanjwa okulula kunye nokuphakamisa ukuwa kancinci ukuhamba xa kufuneka, ukufikelela kwiindawo ezixineneyo.
Amavili amakhulu angaphambili anyusa uzinzo nkqu engceni okanye ngaphezulu, kwaye isihlalo senayiloni esibanzi ngamasentimitha ali-18 sikulungele ngokukodwa kwabo banobungakanani obukhulu besakhelo, kwaye kulula kakhulu ukuba sicoceke. Kuza nesikhwama sokugcina esisusiweyo esisusiweyo, izibambo ze-ergonomic kunye noyilo loyilo lomnqamlezo olwenza ukuba lusongeke ngokulula.
Le walker inokuhlala ukuya kuthi ga kwiipawundi ezingama-300. Yenziwe nge-aluminium engasindi, inobunzima nje obumalunga neepawundi ezili-17.5, umama wam oneminyaka engama-88 ubudala akanabunzima ekuphakamiseni kwiKia Soul yakhe. Kwaye siyayithanda ukuba iza nekliphu ukuyigcina itshixiwe xa isongiwe. Kubantu abangaphezu kweenyawo ezintandathu ubude, unako fumana iNitro ngesakhelo eside.
Ukuba ujonga iroli enokuthi iphindwe kabini njengesihlalo sezothutho, iDrive yeNitro Duet sisisombululo esifanelekileyo kunye nazo zonke izibonelelo zazo zombini.
Baninzi abanye abahambahambayo kubantu abadala ekufuneka beqwalaselwe, kubandakanya iimodeli ezivumela indawo ethe tye ngakumbi kwabo baneengxaki zomqolo.
Fumana ngakumbi iDrive Medical Nitro Euro Style Rollator Walker ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
2. Olona hambo luhamba phambili kubantu abade: UPWalker oQhelekileyo oLungileyo
Ixabiso: $ 745.95 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Inokuhlalisa abantu ukuya kuthi ga kwi-6 '4' kunye ne-350 yeepawundi
Ukuma okubanzi kongeza uzinzo
Ubungakanani besihlalo bubanzi kunoninzi
Izinto ezininzi eziluncedo kubandakanya ibhegi yokugcina kunye nesiphathi sendebe
Kunzima kakhulu xa kuthelekiswa nabanye
Ukuma okubanzi kwenza kube nzima ukuqhuba kwiindawo ezixineneyo
Ukufumana isihambahamba esikulungeleyo, ngakumbi ukuba ungaphezulu kwe-5 '10 ″, kunzima kakhulu. Okude ngokuba mde, kokukhona kubonakala ukuba kukwenza uzibe ngakumbi. Kungenxa yoko le nto Umhambi ohamba ethe tye kukufumana okugcina umva. Ubungakanani obulungiselelwe umntu ngamnye ukuya kuthi ga kwi-6 '4 ″ kunye ne-350 yeepawundi, esi sihambahamba sinika intuthuzelo, uzinzo kunye nokuhamba kakuhle kunye nezinto ezininzi ezongeziweyo abanye abangazenziyo.
Ngeziko elilinganisiweyo lomxhuzulane, uya kuziva uzinzile kwasekuqaleni. Ukuqinisekiswa kokusetyenziswa kwangaphakathi nangaphandle, le walker ilungile kuzo zonke iindawo. Kwaye siyayithanda into yokuba esi sihamba sinamavili erabha endaweni ye-PVC eqinileyo. Inobungakanani besihlalo esingama-intshi angama-25.5 ubukhulu bokomeleza intuthuzelo ngokunjalo, kwaye eso sihlalo sibanzi sinika bonke abahambahambayo indawo ebanzi yozinzo. Iindawo zokubamba ezinamaqhekeza ziyahlengahlengiswa ukuze zikunike intuthuzelo yesiko.
Ukutshixa iziqhoboshi ngesandla kukuvumela ukuba uhlale ngokukhuselekileyo, ngelixa izibambo zokuhlala zikunike inkxaso eyongeziweyo xa sele ukulungele ukubuya. Le walker ine-stow enkulu kwaye inegumbi elininzi kwaye yiya engxoweni ye-velcros ngaphambili. Ngapha koko lo uhambahamba unendawo yokuphatha indebe phezulu ukuze aqiniseke ukuba i-hydration (okanye ikofu!) Ihlala ifikeleleka. Uyakuthanda nokuba iza kuhlangana kwaye ilungele ukuhamba.
Fumana ngakumbi UPWalker Ulwazi oluthe tye lweWalker Walker kunye nokuphononongwa apha.
3. Eyona Ndawo ihamba ngeyona ndlela ibalaseleyo: UMhambi weNOVA 3 Isondo elihamba ngeenyawo
Ixabiso: $ 158.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Eziluncedo:
Amavili abanzi ayenza izinzile kwezona ndawo zingalinganiyo
Isingxobo sokugcina esinokususwa, ingobozi kunye netreyi yongeza lula
Iphrofayili emxinwa xa isongiwe igcina umoya opholileyo
Iivili ezintathu zenza kungazinzi kangako ukuba imodeli yevili ezine
Akukho sihlalo sokuphumla ngekhefu
Inzima ngobukhulu bayo
Ngamavili abanzi asibhozo ububanzi kuninzi, le yokuhamba ivili ezintathu Itikiti nje lomntu othanda ukuhamba kumhlaba ongalinganiyo, kwiipaki, nangaphandle kweendlela zesintu kunye neendawo ezigqityiweyo. Kukuphakama okulungelelanisiweyo ukusuka kwii-intshi ezingama-33 ukuya kuma-intshi angama-37.25, okuthetha ukuba inakho ukuhlalisa nabani na ukusuka ku-5 '5 ″ ukuya ku-6' 2 ″ ubude. Oko kuthetha ukuba inokuguquguquka okuninzi. Ngelixa inomthamo wobunzima othe ngcu kunabanye kwiipawundi ezingama-250, esi sihamba asibonisi sihlalo. Ngqongqo kwabo bahambayo.
Iza nepokethi enkulu enezipper, ibhasikiti yocingo kunye netreyi, zonke ezinokususwa ngokulula. Isandla siphethe ukubambelela okuhle, kwaye kulula ukusebenzisa iziqhoboshi zesandla ezinokutshixwa ukuba umi ndaweni nye. Ngewaranti yobomi kwisakhelo, kunye newaranti yeminyaka emihlanu kwiibhuleki, le walker yakhelwe ukuhlala ixesha elide.
Olunye uphawu lokuma kukhetho lwethu yiprofayili encinci xa le walker isongwe. Ngee-intshi ezingama-9.25 nje ububanzi kulula kakhulu ukutyibilika emva kolwandle okanye kwigunjana. Enye into esicinga ukuba uya kuyithanda malunga nale yokuhamba kukuba nokuba isongelwe, ime endaweni ezinzileyo, ilungele ukusetyenziswa okulandelayo.
Fumana ezinye iinkcukacha ze-NOVA Traveler 3 Wheel Rollator Walker ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
4. Olona hambo luLungileyo luLungileyo: Roller-GO Double foldable Tye Tye
Ixabiso: $ 249.00 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Enye yezinto ezimbalwa ezinokulungiselela ubude besakhelo eside ukuya kuthi ga kwi-6 '6'
Uyilo oluphindwe kabini lwenza ukugcinwa ngokulula
Isisindo esifanelekileyo kwiiponti ezingama-21 kuphela
Amanqwanqwa angaphambi kokufakwa ngaphambili afaka uxinzelelo lwesandla
Isitulo sokuhlala sinokungakhululeki ukuhlala kuso
Ezinye iingxelo zengalo engafakwanga ihleli
Ngaba ubukhe wakhangela isihambahamba esinokuhlala kubungakanani obude kakhulu besakhelo? Asinguwe wedwa ekukhathazekeni kwakho kukuba uninzi lwezinto ezikhoyo onokukhetha kuzo azilungelanga abantu ngaphezulu kwe 5 '10 ″. Kungenxa yoko le nto uya konwaba Roller-Hambani ethe nkqo ezinokuhlalisa abantu abade kangange-6 '6' ukuphakama-enye yezimbalwa eziyenzayo.
Le walker ineendlela ezimbalwa ezenza ukuba yahluke kwabanye ngokunjalo. Ukongeza kulungelelwaniso lokuphakama, inika ii-cuffs ezixhonyiweyo ezilungisiweyo ezincedisa ekugcineni ukuma nkqo ngelixa ungazicinezeli izihlahla. Oko kunokuhamba indlela ende ekunciphiseni ukubuyela umva kobunzima. Ngeepawundi ezingama-21 kuphela, ine-compact ephethe umgangatho ophezulu wokutya / ibhegi yokuthenga enokubekwa ngaphambili kwiroli.
Amavili erabha anzima e-intshi asibhozo awasokuze ahambe tyaba kwaye angathetha-thethana ngemiphezulu ngokulula. Ukubambelela kulula ezandleni kwaye i-brake ikulungele ukuzibandakanya. Olunye uphawu esicinga ukuba luyaphawuleka ngakumbi yindawo ebanzi phakathi kwamavili angasemva okwenza ukuba kungabikho amathuba okuba ukhubeke ukuba unendlela ebanzi.
Ukugcinwa kwenziwa ngokulula kuyilo lokusonga oluphindwe kabini olukhumbuza isambrela.
Fumana ngakumbi ulwazi olujikelezayo oluhamba kabini oluhamba ngokuLula kunye nokujonga apha.
5. Intuthuzelo yeBrava Compact Rolling Walker
Ixabiso: $ 255.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Eziluncedo:
Amavili amakhulu anamavili erabha azinzile kwiindawo ezimtyibilizi ezinjengomthi kunye nethayile
Isihlalo esingu-17.5 intshi ebanzi sihlala abantu abaneesakhelo ezikhulu
Iza nengxowa yokugcina efanelekileyo
Uyilo longeza indawo yokuhamba ukunciphisa ukukhubeka
Ixabiso ngakumbi kuninzi
Inzima kancinci kwi-18.5 yeepawundi
Inzima kancinci kwaye ichitha ixesha ukuyisonga
Incinci kodwa i-sassy, le compact rolling walker isuka eComodità unokulawula umthwalo wobunzima kwezinye zeemodeli ezinkulu, kodwa ngaba uyenza ngaphandle kokongeza ubungakanani. Le walker ikwabonisa enye yeepani zokuhlala ezibanzi, kwii-intshi ezingama-17.5 ngaphesheya. Oko kuthetha ukuba ungahamba ndaweninye, kwaye uhlale kamnandi ngaphandle kokuziva ucofiwe. Kubude obutofotofo bee-intshi ezingama-22.5 ukusuka phantsi, isihlalo sivumela indawo eninzi yokuhamba, njengoko kwenza isakhelo esikhethekileyo.
Amavili angaphambili ee-intshi ezilishumi, kunye namavili e-intshi asibhozo ngasemva anamavili erabha anika uzinzo oluninzi, kwaye ahlala emhle kwaye enobukrwada, nkqu nakwindawo ezimtyibilizi ezinjengomthi kunye nethayile. Le walker iza nesiphatho sekomityi esisuswayo, isiphatho senduku, kunye nengxowa yokuthenga, kunye nebhegi yokugcina ebonakalayo eyenza ukuba kube lula ukuyithatha naphina.
Uyilo oluphindwe kabini lwenza ukuba kube lula kwaye kube lula ukuhambisa, kodwa esi sihamba sisenakho ukubamba ukuya kuthi ga kwiiponti ezingama-300.
Fumana ngakumbi ulwazi lweComodità Brava Compact Rolling Walker apha kunye nokujonga apha.
6. Eyona Ndwendwe ihamba phambili ngeBariatric Walker: Umsebenzi osindayo onzima wokuhamba usonge i Walker
Ixabiso: $ 68.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Eziluncedo:
Iyahlala kwizakhelo ezinkulu ukuya kuthi ga kwi-6 '4' kunye ne-500 yeepawundi
Iifolda ngokulula kunye neethebhu ezimbini ukuvumela amacala ukuba asonge ngaphakathi
Imivalo enqamlezileyo ngaphambili nasecaleni iqinisekisa ukhuseleko
Iivili ezimbini zivumela ukuhamba ngokulula
Umgama obanzi phakathi kokubambelela kwezandla ubeka ubukhulu besakhelo esikhulu
Ayisiyonto ilungele ukusetyenziswa kwangaphandle
Isenokungalingani kwiminyango emininzi esemgangathweni
Ayiziva ingumsebenzi onzima kakhulu kubasebenzisi abakhulu
Kwiimfuno zasemva kotyando okanye ukusetyenziswa gwenxa, ayizizo zonke ii-walkers ezenziwe ngokulinganayo. Ngamanye amaxesha ukuhamba nge-bariatric sisisombululo sodwa sokunyusa umntu kunye nokuhamba, ngakumbi xa bengaziva. Lo uhambahambayo Iliwa eliqinileyo kwabo baneefreyimu ezinkulu, ezihlala ukuya kuthi ga kwiipawundi ezingama-500. Ukugqwesa ekubuyiseleni uzinzo emva kokonzakala okanye uqhaqho, lo uhambahamba ngumsebenzi onzima, neengalo ezisongelayo zigcinwa ngokulula.
Ngokungafaniyo nabahamba ngeroli, le walker ikhethekileyo ekuphatheni izinto ezinzima, ngakumbi njengokongeza uzinzo njengoko umi okanye uhleli. Isakhelo esongezelelekileyo senza ukuba kulungele abasebenzisi abakhulu abasokolayo ukufumana i-walker kwiimfuno zabo ezithile. Isakhelo senziwe nge-aluminium eyomeleleyo kunye namavili aphindwe kabini enamavili e-intshi ngaphambili ongeze uzinzo olongezelelweyo ngelixa lisetyenziswa.
I-cross brace kunye ne-brace side side ziqinisekisa ukuzinza. Esi sihamba sihlengahlengisa abasebenzisi ukusuka ku-5 '5 ″ ukuya ku-6' 4 ″ ubude. Amaqhosha amabini alula avumela i-walker ukuba isongwe ukuze igcinwe lula kwiindawo ezimxinwa. Ukubamba ngesandla kwibar nganye kuvumela izandla ukuba ziphumle kamnandi ngelixa usebenzisa.
Fumana ngakumbi ulwazi olubanzi lweMedline Heavy Duty Bariatric Folding Walker kunye novavanyo apha.
7. I-Medline Simplicity Rollator Walker
Ixabiso: $ 210.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Eziluncedo:
Isitulo segwebu esineenkcukacha ezithe kratya sikhululekile
Iivili ezisibhozo ze-intshi ziyenza izinzile kakhulu
Ukutshixa iziqhoboshi ezivulayo ngonqakrazo olunye
Ukulinganisa kwiipawundi ezili-17 kuphela
Ixabiso elibiza kakhulu xa kuthelekiswa namanye amaninzi
Kubanzi kakhulu kwiminyango esemgangathweni
Iziqhoboshi kunokuba nzima ukuzilungisa
Isimbo esihamba ngesantya sokuhamba ineempawu ezininzi kangangokuba nawuphi na umntu omkhulu angathanda. Ngelixa lomelele kakhulu, linamavili amakhulu ama-8 e-intshi kuzinzo olukhulu, siyachukumiseka ngokwenene zezinye zeempawu ezongeziweyo ezenza ixabiso lentengo ebiza kakhulu lifanele ngokupheleleyo.
Esi sixhobo sokuhamba sakhiwe kwi-Microban ukukhusela i-antimicrobial, ukukhusela ukungunda, ukungunda kunye namanye amabala angaze abe yingxaki. Oko kunika umsebenzisi kunye / okanye umkhathaleli wabo ikhaka ngokuchasene neebhaktiriya, iintsholongwane, iintsholongwane okanye ezinye izifo. Ngelixa esi sihamba sihlala ukuya kuthi ga kwiipawundi ezingama-300, sinesihlalo esongezelelweyo esingama-intshi ezingama-24 esingatyhalwa siphume kwindlela yokubonelela ngendawo xa sihamba, okanye sikwenza kube lula ukusondela kumgxobhozo nakwiitafile.
Indawo engaphantsi kwesihlalo ilungele kakhulu ukuphatha ibhatyi okanye incwadi yokubhalela, kwaye iziqhoboshi zesandla esitshixwayo sinokutshixeka endaweni kwaye zivule ngokulula ngonqakrazo olulula lweziphatho. Kuza nesiphatho sekomityi esakhelweyo kwiibhotile zamanzi okanye ikomityi yekofu abayithandayo yokuhambahamba kusasa ebumelwaneni. Iphinda isonge ngokuthe tyaba kunezinye iimodeli ezininzi ezigcina umoya opholileyo.
Ukuba awuyifuni i-walker ngokusisigxina, qiniseka ukuba jonga isikhokelo sethu kwezona ndonga zilungileyo apha . Ezinye zazo zibandakanya izihlalo ezifanelekileyo zokuphumla ngokukhawuleza.
Fumana ngakumbi ulwazi lweMedline Premium Empower Rollator Walker kunye nokuphononongwa apha.
8. I-Evolution Lightweight Walker Rollator
Ixabiso: $ 349.00 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Kwiiponti nje ezili-14 lo uhamba uhamba ngokulula kakhulu
Ubungakanani bezinto ezininzi onokukhetha kuzo zithetha ulungelelwaniso olwenziwe ngokwezifiso
Isitulo esiphothiweyo kunye nokuphumla ngasemva
Eyona nto ibiza kakhulu kwezo zihlaziyiweyo
Ibhegi yokugcina evulekileyo ayikhuselekanga njengeengxowa ezifakwe iziphu
Ayibandakanyi umnini wendebe
Ukulinganisa iipesenti ezili-14 kuphela, lo mqengqeleki we-ultra-lightweight ungomnye wabahambahambayo abahamba phambili kubantu abadala abazingela into abanokuyifaka ngokulula esiqwini sabo okanye esihlalweni sangasemva. I-casters zangaphambili ezixineneyo zikunika ukuqhuba ngokukuko okwenza ukuba kube lula ngakumbi ukujikeleza iindawo ezixineneyo ngaphakathi nangaphandle.
Isixhobo sokulungelelanisa ukuphakama simahla yenye yeempawu zokuphumelela, okuthetha ukuba unokwenza ngokwezifiso ubungakanani besakhelo sakho ngokujika okulula kweqhina. Isonga ngokulula ukusuka kwiziko ukuze ihlale imile yokugcina, kwaye iza nengxowa yokugcina enkulu evulekileyo nayo. Indawo yokubuyela umva ebanzi iyathandeka, nanjengoko isihlalo siphambili sinephedi. Iivili ezinkulu kunye nokutshixa ngokulula iziqhoboshi zesandla zenza ukuqala nokumisa impepho.
Ungavumeli uyilo olulula lukukhohlise. Le walker iphatha ubunzima bomthwalo ukuya kuthi ga kwiipawundi ezingama-300, kwaye iza ngemibala emithathu-epinki, emnyama neblue. Kuxhomekeke kubude bakho, unoku-odola lo uhamba ngeesayizi ezintathu ezahlukeneyo, kubandakanya mini , rhoqo kunye mde . Umhambi omde uhlala ukuya kuma-350 eepawundi.
Ukukhangela ezinye izixhobo zokuhamba ezingasindi? Jonga isikhokelo sethu kwezona zihlalo zinamavili alula.
Fumana ngakumbi ulwazi lwe-Evolution Lightweight Medical Walker Rollator kunye nokuphononongwa apha.
9. Qhuba i-Medical Go-Lite kwiRolator Walker engaphezulu
Ixabiso: $ 159,00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Eziluncedo:
Iivili ezikhulu zenza le walker izinze ngokunzulu
Isitulo esibanzi kunye nokuphumla ngasemva kuvumela amaxesha okuphumla kukhenketho olude
Songa ngokulula ukugcinwa
Ukuthwala ngokufanelekileyo ibhasikithi yeemfuno
Unokucofa iminwe xa usonga ukugcinwa
Akutshixeki xa kuvaliwe
Ayilungelanga kakuhle ubungakanani besakhelo esikhulu
IDrive Go-Lite oversized Walker EbenguThixo wokwenene kumama owaphathwa sisifo sentambo kwiminyaka embalwa edlulileyo. Le walker izinzile kakhulu kwaye inezinto ezininzi eziluncedo ezenze ukuba ikwazi ukubuyela kwimeko yesiqhelo apho kungafuneki ukuba iphinde isetyenziswe khona.
Iivili ezingama-intshi ezingama-intshi ezingangqubaniyo zilungele ukusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle, ngakumbi ukuba ufuna into enokubamba indawo engalinganiyo ngelixa ugcina uzinzo olupheleleyo. Esi sihamba sihlengahlengiswa ukuphakama kwaye kulula ukusisebenzisa iziqhoboshi zesandla ezenza ukuba kube kokulungeleyo kubantu abadala abajonge ukuhlala bekhuthele kwaye baqhubeke nokuhamba.
Kukhenketho olude, isihlalo esixhonyiweyo senza indawo yokuphumla ekhawulezileyo, kwaye umva ophathwayo uwenza ukhululeke ngakumbi. Ikwaqulethe inqanaba lesitulo esifanelekileyo sokuthwala naziphi na izinto eziyimfuneko-ukusuka kwibhotile yamanzi ukuya kwisipaji okanye kwisipaji. Ikwalula ngokulula ukugcinwa ngokukhawuleza esiqwini okanye kwezinye izithuba zezithuthi, ke iyahamba naphi na apho ifuna khona.
Le walker inokuhlala ukuya kuthi ga kwiipawundi ezingama-500, isihlalo esineephedi sibanzi ngokungaphezulu, ke ngoko ubukhulu besakhelo somntu kufanelekile ukusigcina engqondweni njengoko isihlalo singama-intshi ali-18 ukunqumla. Inye into endichukumisekayo kukuba zingaphi izinto ezinokusetyenziselwa le walker, ukusuka ekuthutheni ingobozi yokuhlamba impahla ukuya ekuthwaleni kwiingxowa zokutya. Isilumko.
Fumana ulwazi oluthe kratya lweDrive Medical Walker Roller kunye novavanyo apha.
10. I-Beyour Walker ethe tye ene-Backrest
Ixabiso: $ 209,99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Uyilo olwahlukileyo lwemida yokugoba
Ukubambelela ngokukuko kunye nokuphumla kwesihlahla
Isitulo esinendawo yokubuyela umva yokuhlala
Amavili angaphambili angalawuleka kakhulu
Uncedo lokunqaba lomqobo luvumela ukuphakanyiswa ngokulula kwamavili angaphambili
Inzima kakhulu kuninzi
Ayisebenzi njengokuma kwesakhelo eside
Inokuba negumbi elininzi ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye ukulungiselela abahluli ababanzi
Ngaba ukhathazekile ngabahambahambayo abashiya umva wakho kwisithuba esigobileyo? Rhoqo oko kubangela iingozi kuba uzifumana ungumntu osebenzisa isihambahamba ujonge ezantsi endaweni engaphambili. Umhambi ohamba ngokuthe tye Uyilo olwahlukileyo olwahlukileyo olujongana nentloko leyo.
Le walker yenzelwe abantu abafuna ukuma nkqo kodwa bafuna uncedo olunje ngokujongana nemicimbi yokuhamba. Ngamanqanaba amathandathu okuhlengahlengiswa kwabantu abavela kwi-5-1 ukuya kwi-5'10 kwindawo emileyo, okanye kubantu abade bafike kwiimitha ezintandathu ubude kwisitulo esincinci, esi sihamba sihamba ngesixhobo sokuphumla ukuvumela ukufikelela ngokulula kwe-ergonomic kwiihandgrip. Iibhuleki zezandla kunye neendlela zokutshixa zigcina lo uhambahamba ezinzile xa emisiwe.
Xa isetyenzisiwe kwindawo yokuhlala, le walker inomqolo wokubuyela umva. Ikwabandakanya ibhegi egxothiweyo, kunye nenduku / isambrela. Iivili ezisibhozo ze-intshi zinemisebenzi ejikelezayo engama-360-degree ngaphambili, eyenza le walker ibe nokuhamba-hamba kakhulu kuzo zonke iintlobo zomhlaba. Uncedo lokunqanda umqobo likuvumela ukuba uphakamise ngokulula amavili angaphambili ukuze ufumane oku kuhamba ngaphezulu kweendlela kunye nezinye izithintelo ezincinci.
Fumana ngakumbi i-Beyour Tight Walker ngolwazi lwe-Backrest kunye novavanyo apha.
11. Owona uhambahamba ngokuKhaphukhaphu oBalaseleyo: Indawo yokuGcina uBomi obuKhuselekileyo
Ixabiso: $ 99,00 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ngeeponti ezisibhozo nje kulula ukuphosa emotweni
Uyilo olulula lokusonga
Ima yodwa xa isongwe
Indawo yokuhlala ukuya kuthi ga kwiiponti ezingama-400
Izilayidi zangasemva ziyaphuka ngokulula kwaye kunzima ukuzitshintsha
Ayonelanga indawo yokuhamba phambili ukuya ngasemva
Ayilunganga ekusetyenzisweni kwangaphandle
Mhlawumbi awukho kwintengiso yomhambi ogcweleyo. Ukuba ujonga isihambisi esisisiseko oza kusisebenzisa xa ujikeleza ukwenzakala okanye uqhaqho, okanye ufuna nje uzinzo kancinci kunentambo, Umhambi ohamba kwindawo yoBomi lukhetho oluqinileyo. Inokugoba ukuya kumaxesha amancinci amancinanana kunesihambisi esiqhelekileyo, ngoko ke kulula ukuyityibilika ecaleni kwesihlalo sakho okanye emotweni.
Ngeeponti ezisibhozo nje, le yokuhamba ayisiyonto ilula xa kufikwa ekusebenzeni. Ngamavili angaphambili angama-intshi amathandathu kunye ne-ski-glide elula ngasemva, inokuhlala abantu ukuya kuthi ga kwiipawundi ezingama-400 kuzo zonke iintlobo zomhlaba. Izibambo zinokuhlengahlengiswa ukusuka kwi-32 ukuya kwi-intshi ezingama-38 ukusuka phantsi kwaye kwii-intshi ezingama-24 ububanzi zinokungena ngokulula kwiminyango engqingqwa naphakathi kwetafile okanye imiboniso yevenkile.
Xa isongiwe (kakhulu njengesambulela sokuhamba) esi sihamba siyi-5 x 7 intshi ubukhulu, kwaye sinokuzimela sisodwa xa sisongiwe. Yifumane ngee-metallic shades ezintathu ezimnandi. Ukuba ungathanda ibhegi yokugcina okanye amavili ajikelezayo , zinoku-odolwa ngokulula ngokwahlukeneyo.
Fumana ulwazi oluthe kratya lweSave Walker saver Walker kunye nokuphononongwa apha.
12. UHugo oShukumayo ohamba ngeRolator Walker
Ixabiso: $ 108.89 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Olona hlengahlengiso lubanzi kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo
Iprofayili emxinwa ingena kakhulu kwiminyango esemgangathweni
Ukubamba ngesandla kwe-Ergonomic kwenza ukubamba kwendalo kube ngakumbi
Ipani yesihlalo emxinwa kakhulu
Iivili ezinzima azizizo ezona ndawo zibuthelezi njengethayile kunye neenkuni
Kunzima kakhulu ukuwa kunye nokuvula kwakhona kuninzi
Inkampani eyaziwayo ngezithuthuthu zayo ezithandwayo zokuhamba ngombane ikwenza izixhobo ezininzi zokuhamba njengale ndlela ihamba ngesondo. Yintoni eyenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zihamba-hamba kubantu abadala? Singaqaqambisa ubunzima bayo obukhaphukhaphu, obungaphezulu nje kweepawundi ezili-15, isenza ukuba kube yenye yezona zinto ziphononongwa ngokulula. Oko kubalulekile kubantu abadala abahlala befuna ukusonga i-walker yabo bayigcine okanye bayithathe emotweni.
Ikwanelinye lawona manqanaba abanzi okuziqhelanisa ngokobude, ukulungelelaniswa kwabantu ukusuka kwiinyawo ezintlanu ubude ukuya kwi-6 '2'. Isandla se-ergonomic sokubambelela senza ukufikelela kwiibhuleki zendalo kwaye zikhululekile. Akukho zixhobo zifunekayo zokudibanisa le walker kwaye isongeke ngokulula phantsi ukuze ihambe kwaye ihambe.
Ngobunzima beepawundi ezingama-300, kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba isihlalo sineprofayile emxinwa ngakumbi kuninzi kwii-intshi ezili-12 nje ububanzi. Ngaphantsi kwesihlalo esinezixa uyakufumana ibhegi yokugcina efanelekileyo kwaye le walker ikwanendawo yokubamba ngasemva edibeneyo, iyenza ibe mnandi xa ilixesha lokuphumla. Iivili ezinkulu ezisibhozo zee-intshi zenza uzinzo olongezelelekileyo ngokunjalo.
Ukuba unomdla ekuphononongeni izixhobo zokuhambisa eziziimoto, jonga isikhokelo sethu kwezona scooter zihamba phambili.
Fumana ngakumbi ulwazi lweHugo oluShukumayo lweRolator Walker kunye nokuphononongwa apha.
13. I-OasisSpace Aluminium Rollator Walker
Ixabiso: $ 159,99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Uyilo olwahlukileyo olunamavili angaphambili amakhulu ukonyusa uzinzo
Kulula ukuyisebenzisa kumhlaba ongalinganiyo
Ubunzima beepawundi ezingama-350 phakathi kwezona zinkulu kuzo zonke ezihlaziyiweyo
Inxalenye yokuwa okuyinxalenye yokungena kwiminyango eqinileyo
Kunzima ukuwa ngokupheleleyo
Imiyalelo yemveliso iyasilela
Esi sihamba sihamba kancinci sibonisa uyilo oludibanisa amavili amakhulu e-intshi ngaphambili, kunye namavili e-intshi asibhozo ngasemva, ehambisa uzinzo engceni, ezindleleni nakwezinye iindawo ezingalinganiyo. Amavili amakhulu angaphambili athatha uxinzelelo ngelixa ngasemva ekutyibilikisela kakuhle naphi na apho ufuna ukuya khona. Amavili anika abasebenzisi ulawulo lwe-agile, kwaye iingalo eziqhekezayo zibonelela ngokulula ukufikelela.
Esi sihamba sihamba sinendawo yokuhlala ebanzi eyongezelelweyo xa siphumle, kwaye sinokuhlala ukuya kuthi ga kwiiphawundi ezingama-350 - owona mda wobunzima buphezulu kubo bonke esibajongileyo. Inendawo yokubuyela umva ebanzi evumela ukuhlala ngokulula kwikhompyuter, edesikeni okanye etafileni.
Kuza kuxhotyiswa ngengxowa enkulu yesitokhwe ukuphatha izinto ezaneleyo zokuhamba ixesha elide okanye iintsuku ukuya kuthenga, kwaye ikwakhona ukuwa okwenxalenye okulula ukuba ufuna ukuyongena kwiminyango eqinileyo. Enye ibhonasi? Indibano elula ngokwenene, oya kuyithanda.
I-OasisSpace nayo yenza kancinci ukuhamba okuhamba ngeendlela ezahlukeneyo ekwafumana uphononongo olukhulu malunga nokwakhiwa kwayo okuqinileyo kunye nokuwa ngokulula.
Fumana ngakumbi ulwazi lweOasisSpace Ultra Folding Rollator Walker kunye nokuphononongwa apha.
14. I-Medline Rollator Walker
Ixabiso: $ 118.00 Thenga ngoku kwi-1800wheelchair.com Eziluncedo:
Isitulo esitofotofo kunye nendawo yokubuyela umva
Zisonga ngokulula ngokunyusa nje isihlalo
Ukubamba okudibeneyo kunye neziqhoboshi zokutshixa
Izibambo zibonisa uhlengahlengiso lokuphakama okulula
Iimpawu ezingaphantsi kwezinye
Izibambo azandisi ngokwaneleyo kubantu abade
Amavili amancinci kunamaninzi
Ukuba ubukhe wazingela umntu ohamba kancinci ongasongeliyo ngokulula ngaphandle kokucela uncedo olungaphezulu, lo uhamba ngeMedline inobunzima nje obuziiponti ezili-16. Ngokumane usiphakamisa isihlalo sisonge tyaba ukuze usilayishe ngasemva kwesihlalo semoto okanye esiqwini kungekho zinkxalabo.
Ngelixa lo uhambahamba engenazo ezinye izinto ezimnandi zabanye, ayikhangeli kwiimfuno. Inobude obuguquguqukayo ngokulula. Izibambo zingahanjiswa ngokususa nje iqhina elijijekileyo kunye nokuhambisa imivalo phezulu okanye ezantsi. Izibambo zokubamba ezinqamlezileyo zibonelela ngenkxaso eninzi kunye nokutyhala okukhawulezayo ezantsi kweziqhoboshi zokutshixa isihambahamba endaweni.
Isihlalo esiduduzayo esidityanisiweyo sinokushenxiswa ngokulula ukuze sifike kwigumbi lokugcina elingaphantsi elinendawo yokugcina izinto, kwaye i-backrest edibeneyo yenza ikhefu ulonwabo, hayi intlungu. Njengomnye umntu ohamba ngeMedline esiyijongileyo, le ikwaquka ukugqitywa kwe-anti-microbial enceda ukugcina iintsholongwane kunye neebhaktiriya. Le walker inokuhlala ukuya kuthi ga kwiipawundi ezingama-250.
Fumana ulwazi oluthe kratya lweMedline Rollator Walker kunye nokuphononongwa apha.
15. I-Lumex 3-Wheel Cruiser Lightweight & Compact Folding Walker
Ixabiso: $ 149,99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Izibambo ezihlengahlengiswayo kunye neziqhoboshi kunye neendlela zokutshixa
Ilula kakhulu kwiipawundi ezili-14
Inketho elungileyo kwabo bangadingi sihlalo
Ukulungelelaniswa kobude obahlukeneyo
Ingxowa enkulu yokugcina eneziphu
Ayizinzanga njengokuhamba kwevili ezine
Ngamana ungaqengqeleka ngokukhawuleza kunokuba ubulindele
Oku kukuhamba okuhle kwabo basebenzisa enye kuphela ngamanye amaxesha. Ukuba ucinga ukufumana i-walker oza kuyisebenzisa ngokuthe ngqo xa uphumile kwaye, nokuba kungohambo oluya kwivenkile yokutya okanye uhambahamba epakini, ukuba awudingi sihlalo, kodwa ufuna nje ukongezwa ukuhamba, ukuhamba ngevili ezintathu kukaLumex lukhetho oluhlangeneyo nolulula kwaye kulula ukulugcina kwisitulo esingasemva okanye esiqwini semoto yakho.
Le walker inobunzima obungama-14 eepawundi, kunye nesakhelo sealuminium ehlengahlengiswa kakhulu. Izibambo zihlengahlengisa ukusuka kwii-intshi ezingama-33 ukuya kwii-intshi ezingama-37 ukulungiselela iindawo ezahlukeneyo eziphakamileyo. Izibambo ze-ergonomic kulula ukuzisebenzisa kwaye zibonisa zombini iziqhoboshi kunye nendlela yokutshixa ukuze umntu ohambahamba ahlale endaweni efanelekileyo xa uhlala phantsi uphumle.
Amavili aqengqelekayo asibhozo e-intshi omelele kwaye azinzile nokuba usebenzisa le nyawo ngaphakathi okanye ngaphandle, kwaye uyayixabisa ingxowa enkulu enezinto ezinokukwazi ukulungiselela zonke izinto eziyimfuneko ukusuka kwiipaji ukuya koomatshini abancinci beoksijini. Le walker iza ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu okanye i-pewter, kwaye iyafikeleleka ngokwaneleyo ukuba ibe yindlela yogcino kulowo uhamba ngesikhulu isihlalo.
Fumana ngakumbi uLumex 3-Wheel Cruiser Compact Folding Walker ulwazi kunye nokuphononongwa apha.
16.I-Rolling Walker yokuHamba ngokuBukhoma
Ixabiso: $ 136.99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Ubunzima beepawundi ezingama-300
Unokugoba kubungakanani be compact ngakumbi kuninzi
Kuquka isikhwama sokugcina esisuswayo
Iivili zemidlalo zilungile kwiindawo ezininzi
Ayisiyonto ilungileyo kubungakanani besakhelo esinde
Kunzima kakhulu xa kuthelekiswa nabaninzi
Amavili ayizizo ezilungileyo kwiikhaphethi ezithambileyo
Inye kuphela into oza kuyazi ukuba ukhe walwela ukufumana eyakho okanye yokuhamba komnye umntu emotweni yakho kukubaluleka kokuphinda kube lula. Inkqubo ye- Isikhephe esihamba ngeenyawo yenye yezona zinto zilunge kakhulu esizibonileyo xa kufikwa kubungakanani be-compact yokugcina, nokuba kukwitraki yakho, isitulo sangasemva, okanye ikhabethe. Ngelixa le walker ityhilwayo inokuba nkulu njenge-36 x 28 x 18 intshi, inokuthi isongelwe ezantsi ukuya kubukhulu obungu-22 x 11 x 9 intshi, njengoko amavili angaphambili anokususwa ngokucofa nje iqhosha.
Kodwa sukuphambanisa ukuphatheka ngenxa yokunqongophala kweempawu ezifunekayo, kuba esi sihamba sinazo zonke izinto onokuzifuna kuncedo lwakho lokuhamba. Oku kuquka isihlalo lula kunye backrest. Izibambo zibanjiwe ukubeka izandla kwindawo yokungathathi hlangothi, ukunciphisa uxinzelelo kunye nokudinwa. Ukufikelela ngokulula kwisitayile sebhayisikile ngesandla iziqhoboshi zivumela abasebenzisi ukuba bacothe ngokukhawuleza kunye neziqhoboshi zokutshixa ivili ukuqinisekisa ukuba umntu ohambahambayo uhlala endaweni xa ehleli phantsi okanye emi ngeenyawo.
Le walker ibandakanya isiphatho sendiza esidityanisiweyo kunye nebhegi yokugcina enokufunyanwa ukuze kugcinwe izinto ezinje ngefowuni, isipaji okanye amayeza asondele. Iivili zemidlalo ye-intshi ezisibhozo ziyimidlalo yazo zonke iintlobo zomhlaba, kwaye ngelixa liphatheka, lo mqengqelezi unokuhlala ukuya kuthi ga kwiipawundi ezingama-300 kwaye ubonelele ngokulungiswa kokuphakama okulula.
Fumana ulwazi ngakumbi ngeVive Folding Rollator Walker kunye nokuphononongwa apha.
17. I-ELENKER Walker ethe tye
Ixabiso: $ 219,99 Uphengululo loMthengi waseAmazon Ivenkile eAmazon Eziluncedo:
Uyilo oluthe tye lukugcina umile ukuze ususe iintlungu ekugoba
Iipali zokubamba iingalo zikhulula entanyeni nasemagxeni
Iivili zangaphambili ezijikelezayo ezingama-360 zenza kube lula ukuqhuba
Isitulo sokuphumla ngasemva kunye nengxowa yokugcina nayo
Ayilolona khetho lubalaseleyo kubantu abafutshane okanye abade kakhulu
Uziva ubhuty ekuqaleni
Iivili ezinzima ze-PVC ziphakamisa amaqhuma
Uninzi lwabantu abadala luyasokola neengxaki zomqolo ezenziwa mandundu ngokugoba phezu komhambi wesintu. Lo ELENKER uhamba nkqo isombulula ukuba ukuvumela ukuma ngokuthe nkqo ngelixa ugcina iselfowuni. Olu hambo luphakanyiswa ukusuka kwii-intshi ezingama-38 ukuya kwezingama-46 ukusuka emhlabeni. Kulula ukuyiqhuba, enkosi kwiivili zangaphambili ezijikelezayo ezingama-360 ezenziwe ngePVC.
Indawo yokubamba iingalo igcina umzimba wakho ungqamene kwaye inceda ekupheliseni uxinzelelo lwentamo negxalaba elibangelwa kukugoba. Ikwanaso nesihlalo esitofotofo esinendawo yokubuyela umva kunye nokugcina umva ukugcina iimfuno zisondele. Iziqhoboshi zezandla zikuvumela ukuba utshixe amavili angasemva ukuze ungatyibiliki xa uhleli phantsi. I-Walker ingaphatha ubunzima ukuya kuthi ga kwiipawundi ezingama-300, kwaye iya kugcina abantu ukuya kuthi ga ku-5 '10' ubude kwindawo emileyo, ngelixa abantu abade beya kuba nokwehla kancinci xa beyisebenzisa.
Esi sihamba sihamba ngokulula, kwaye sifuna indibano encinci. Awuyi kufuna naziphi na izixhobo ezizodwa ukuze ulungele ukuqengqeleka kwimizuzu.
Fumana ulwazi oluthe kratya lwe-Walker ye-ELENKER kunye nokuphononongwa apha.
Zeziphi izinto eziluncedo ohamba nazo umhambi wakho?
Banikezela ngezihlalo ezimnandi kunye neendawo zokubuyela umva ngekhefu ngelixa ujikeleza ubumelwane, kunye nokuqina kozinzo kunye nokhuseleko. Ingcebiso yethu? Qiniseka ukuba uphanda ngomahluko kubungakanani bamavili nakwizixhobo. Amavili amakhulu asebenza ngokugqwesileyo kumhlaba ongalinganiyo, kwaye amavili erabha angenza ukuba izihlwitha zingabikho lula.
Ngaba banamabhuleki ezandla asebenziseka lula atshixwayo? Uyakufuna kwakhona ukujonga ukuba zilula kangakanani kwaye zigcina, zingakanani ubunzima abanokuhlala kuzo, kunye nezinto ezinje ngobubanzi besitulo kunye nokulungelelaniswa kobude.
Kutheni le nto kufuneka ucinge ngokusebenzisa isiHamba?
Kubantu abadala abahlala bekhutshelwa ngaphandle ngenxa yeentlungu zesifo samathambo, iingcali zonyango bacebise ukuba baqhubeke nokushukuma nokuzilolonga njengeyona ndlela yokunciphisa ukungakhululeki. I-walker okanye i-rollator inokuphucula kakhulu amandla abo okwenza kanye loo nto.
Inyaniso, uMbutho weentliziyo ucebisa ukumodareyitha ukuhamba imizuzu eyi-10-15 ngosuku, kathathu ukuya kane ngeveki, ukonyusa amandla kunye namandla. Ngelixa oko kunokubonakala njengeyona njongo iphakamileyo kwabanye, ukuhamba ngenyawo kunokwenza kube lula, kwaye kube mnandi ngakumbi.
Zeziphi ezona Ndwendwe zitshiphu zitshiphu?
Ngokucacileyo, ayingabo bonke abahambahambayo abafanayo. Xa kuziwa kwixabiso, uya kufumanisa ukuba konke malunga nezinto eziluncedo. Phakathi kwezona zifikelelekayo kwicandelo zii-bariatric walkers, ezisetyenziswa kakhulu kunyango lomzimba, kunye nakwabo baneesakhelo ezikhulu abafuna uncedo ukuze baphinde bahambe.
Zininzi izizathu zokujonga umntu ohamba ngeebhari, kwaye iingcali kwi-VeryWellHealth benze umsebenzi olungileyo wokuchaza ukuba basebenza nini kwaye njani ngokusebenza kakuhle kunyango.
Zeziphi ezinye izinto eziSebenziselwa abahambahambayo?
Nokuba wena okanye abantu obathandayo abacwangcisi ukusebenzisa i-walker njengoncedo lokuhamba ixesha elide, uya kumangaliswa kukusetyenziswa okuninzi oya kubafumana, wakube unayo.
Ukusuka ekuthengeni kwinqwelo yokutya ukusuka emotweni ukuya kwiibhasikithi zokuhlamba iimpahla ezingenakulindeleka kunye neebhokisi, i-walker yakho inokuvumela ukuba wenze imisebenzi emininzi ngokuzimeleyo.
UWillie Nelson Ukufa kweHoax ubetha amajelo eendaba (kwakhona)
ungayifumana njani imigqaliselo ngexabiso eliphantsi ngaphandle kweinshurensi
ukufumana phi ulawulo lokuzalwa ngaphandle kweinshurensi
Bangaphi abantu emhlabeni abane-schizophrenia
ukutya ozokutya xa unefiva
ulwehlisa njani uxinzelelo lwegazi ngokwendalo nangokukhawuleza
Kutheni le nto i-monistat ikwenza urhawuzelele ngakumbi